पार्टी एकताप्रति प्रचण्डलाई पछुतो, ओलीलाई नेतृत्व मान्न हिनताबोध! – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/पार्टी एकताप्रति प्रचण्डलाई पछुतो, ओलीलाई नेतृत्व मान्न हिनताबोध!
पार्टी एकताप्रति प्रचण्डलाई पछुतो, ओलीलाई नेतृत्व मान्न हिनताबोध!
काठमाडौं– नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच मनमुटाव बढ्दै गएको नेताहरुले बताउन थालेका छन् । ओली र प्रचण्डबीच सरकार र पार्टीको आलोपालो नेतृत्व लिने सहमति भएको भनिँदै आएको छ । तर, जनतामा नकारात्मक सन्देश नजाओस् भन्नका लागि पूरा सरकारको कार्यकाल ओलीले नेतृत्व गर्न आफूल् प्रस्ताव गरेर पार्टीमा निर्णय गराएको प्रचण्डले बताउँदै आएका छन् ।
पार्टी र जनताका लागि आफूले त्याग गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीसहित सरकारमा रहेकाहरुलाई सत्ताको घमण्ड बढेको प्रचण्ड समूहको बुझाइ छ । जनताले दिएको बहुमत एक नेताको कारण नभइ सिङ्गो पार्टी नेकपाका कारण आएको भन्दै प्रचण्डले दुई तिहाइको सरकार छ भनेर सरकारमा बस्नेहरूमा घमण्ड बढेको आफूनिटकका व्यक्तिहरुसँग गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
यसलाई पुष्टि गर्ने गरी बुधबार बसेको स्थायी समिति बैठकमा प्रचण्डले पार्टी व्यवस्थित ढंगबाट चल्न नसकेको बताए । पार्टी एकता गर्नु गलत त थिएन भन्ने सोचाइ आउन थाल्ने अवस्था सृजना हुनु दुखद् रहेको भन्दै प्रचण्डले अहिलेकै अवस्था रहिरहे पार्टी विघटन हुन सक्ने बताउने गरेका एक नेताले जानकारी दिए ।
आफूलाई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका रहेको भनिए पनि सो अनुसार हुन नसकेको भन्दै प्रचण्डले पार्टी एकताका बेलादेखि भएका सहमति कार्यान्वयन नभएमा पार्टी विघटन हुन सक्ने संकेत दिन थालेका छन् । पार्टी एकता भएको औपचारिक घोषणाको अघिल्लो दिन २०७५ जेठ २ गते ओली र प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति भएको प्रचण्ड समूहले बताउँदै आएका छन् । तर, यस सहमतिबाट पछि हटेर पूरा कार्यकाल ओलीलाई दिने आफ्नो निर्णय गलत भएको महसुस प्रचण्डले गर्न थालेका छन् ।
नेपालमा डाक्टरलाई पनि कोरोना पुष्टि, ललितपुरमा भेटिएका संक्रमित स्वास्थ्य सेवा विभाग करारका डाक्टर
चैतको घरभाडा मिनाहाको स्थानीय तहले अनुगमन गर्ने
नेपाल प्रहरीको सामाखुसी पम्पको पेट्रोलमा पानी भेटियो
कोरोनाले ज्यान गुमाएकी आफ्नी आमालाई टाढैबाट अन्तिम बिदाई